AUKEY LS02 स्मार्टवाच समीक्षा र एयरकोर 15W चार्जर | ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | 14/07/2021 18:00 | समीक्षा
आज हामी तपाईसँग एन्ड्रोइड्सिसमा कुरा गर्छौं दुई धेरै धेरै भिन्न उत्पादनहरू तर उनीहरूसँग केहि सामान्य छ। तिनीहरू उही निर्माताबाट आएका हुन्, AUKEY, र तिनीहरूको क्षेत्र मा प्रत्येक एक समान प्रदान गर्न कोशिस गर्दछ, को एक उत्पादन एक सस्तो मूल्य मा राम्रो प्रदर्शन। AUKEY पहिले नै पर्याप्त भन्दा बढी छ प्रविधि क्षेत्र मा परिचित एक विशाल प्रस्ताव को लागी सामानको दायरा र स्मार्टफोनका लागि उत्पादनहरू।
यस पटक हामी ती दुई मध्ये केन्द्रित छौं। हामी परीक्षण गर्न सक्षम भएका छौं स्मार्टवाच AUKEY LS02 र चार्जर ताररहित एयरकोर १ 15 डब्लू। बजारमा पुग्ने दुई उत्पादनहरू हामी बजारमा फेला पार्ने सम्भावनाहरूको अनन्तताको लागि एक अर्को विकल्प हुन।
1 AUKEY र यसका उत्पादनहरू टास्कमा छन्
2 LS02 स्मार्टवाच
2.1 LS02 स्मार्टवाच डिजाइन
3 AUKEY LS02 सुविधाहरू
4 AUKEY एयरकोर 15W वायरलेस चार्जर
AUKEY र यसका उत्पादनहरू टास्कमा छन्
फर्म AUKEY को प्रयास को लागी सबै को लागी उपलब्ध गराउँछ राम्रो मूल्यमा गुणस्तर उत्पादनहरू। हामी यस निर्माताबाट धेरै उत्पादनहरू परीक्षण गर्न पर्याप्त भाग्यशाली छौं, र सामान्यतया हामी फेला पार्दछौं राम्रो फिनिश र स्तर सुविधाहरू। आज हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं दुई उत्पादनहरू जुन यो ब्रान्ड दर्शन साझा गर्दछ.
जब हामी स्मार्टवाचमा निर्णय गर्छौं हामी धेरै पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्छौं। मूल्य, लाभहरू यसले के प्रस्ताव गर्दछ र के डिजाईन हामीलाई अपील गर्दै। हामी कुनै पनि खरीदको लागि खातामा यि परिस्थिति लिन सक्छौं। यसैले आज हामी यसलाई हेर्दछौं स्मार्टवाच AUKEY LS02 र वायरलेस चार्जरमा एयरकोर १ 15 डब्लू.
हामी एक स्मार्टवाच मोडलको सामना गरिरहेका छौं यो विवेकशीलको रूपमा कार्यशील। एक उपकरण जुन ध्यान आकर्षित गर्दैन शान्त हुनको लागि यसको डिजाइन द्वारा। यो तपाइँको नाडीमा कुनै ध्यान नदिई जान सक्छ। तर यो हामीलाई प्रदान गर्दछ ठूलो कार्यक्षमता र मिलान गर्न प्रदर्शन धेरै धेरै मूल्यहरूको धेरै अन्य मोडेलहरूको।
LS02 स्मार्टवाच डिजाइन
जसरी हामी तपाईलाई भनेको छु, AUKEY LS02 यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहँदैनन् जोहरूका लागि एक घडी हो। "सामान्य" आकारको साथ यसको आकृति वा र inहरूमा स्ट्रिडिनेसाहरू हुँदैन, तर योaसँग अद्भुत हुँदैन स्लिम र सुरुचिपूर्ण डिजाइन। एसीको साथ एक स्मार्टवाचखैरोमा आयताकार आकारको साथ धातु ह्यास अँध्यारो जहाँ तपाईंको फिट ''२ ईन्च स्क्रीन.
उहाँको दाहिने तिर यो भेटियो यसको केवल भौतिक बटन यस कार्यको रूपमा घरको रूपमा कार्य गर्दछ, वा खुला / बन्दको साथ।
मा पछाडि हामीले भेट्टायौं मुटुको दर मोनिटर हामीसँग यो नाडीमा छ भने लगातार मापन गर्न सक्षम छ। द्रुत र भरपर्दो मापन, किनकि हामी अन्य उपकरणहरूसँग तुलना गर्न सक्षम भएका छौं। केहि उपयोगी जब विशेष गरी खेल गतिविधिहरूमा आउँदछ। यसको पछाडि हामी फेला पार्दछौं ब्याट्री चार्जका लागि चुम्बकीय पिनहरू।
उसलाई समात्नुहोस् UKEY LS02 १०% छुटको साथ आधिकारिक वेबसाइटमा
बेल्ट उसको अर्को विवेकपूर्ण बुँदा हो। स्क्रिनको आकारको हिसाबले चौडाइको म्याट कालो। तर एक स्पर्श संग जुन धेरै रमाइलो र एक हो औसत भन्दा माथि गुणस्तर यदि हामी अन्य मोडेलहरूसँग तुलना गर्छौं जुन हामी परीक्षण गर्न सक्षम भएका छौं।
AUKEY LS02 सुविधाहरू
यो सबै चीज हेर्ने समय हो के AUKEY LS02 हामीलाई प्रदान गर्न सक्षम छ। हामीले सामना गर्नुपर्दा हामीले दिमागमा राख्नु पर्छ एक उपकरण जुन हामी किफायती विचार गर्न सक्छौं यदि हामी अन्य मोडेलहरूसँग तुलना गर्छौं भने। तर यो केहि चीज हो जुन LS02 को पक्षमा काम गर्छ यसले लाभहरू दिन्छ।
तपाइँको स्क्रिनबाट सुरू गर्दै, एक १.1,4 ईन्चको विकर्णको साथ TFT प्यानल र साथ 320 x 320 dpi रिजोलुसन, यो आकार को लागी पर्याप्त भन्दा बढी। सूर्यको प्रकाशको स्थितिमा पनि राम्रो देखिन्छ। पनि छ चमक स्तर सेटिंग्स र हामी of प्रकारको ब्राइटनेस चयन गर्न सक्छौं। केहि अन्य धेरै उपकरणहरूमा हराइरहेको छ।
समय AUKEY LS02 को एक शक्ति हो। यो तपाइँको स्मार्टफोन संग आश्चर्यजनक साथ प्राप्त हुनेछ, र त्यहाँ कुनै सूचना हुनेछ जुन तपाईं छुटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट सूचनाहरू कल, स्क्रिनमा सन्देशहरू पढ्नुहोस् र सक्रिय गर्नुहोस् तपाईंको मनपर्ने सामाजिक नेटवर्कबाट सूचनाहरू.
Un तपाइँको मनपर्ने खेल गर्न आदर्श साथी तपाइँको कलाई बाट संगीत प्लेब्याक नियन्त्रण। एउटा महत्त्वपूर्ण विवरण भनेको AUKEY LS02 हो वास्तवमै थोरै तौल, तपाईंले याद गर्नु भएन कि तपाईंले यो लगाउनु भएको छ। हामी भेट्छौं १२ खेल मोडसम्म तपाईले यसलाई लैजाने निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको क्यालोरी खपत वा उन्नत किलोमिटरको नियन्त्रण। लक्ष्यहरू र प्रगतिहरू सेट गर्नुहोस् र चुनौतीहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
तपाईंको घडी पसिना वा पानीको झरनाबाट बिग्रिएको बारेमा तपाईंले चिन्ता लिनु हुँदैन। AUKEY LS02 सुविधाहरू IP68 प्रमाणीकरण धुलो र पानी प्रतिरोध। -20º र 45º बीचको तापमानको सामना गर्दछ। अब AUKEY स्मार्टवाच किन्नुहोस् यसको वेबसाइटमा छुटको साथ LS02।
र पक्षहरू मध्ये एक जुन प्रयोगकर्ताहरूले बढी मूल्य दिन्छ ब्याट्री जीवन, यो पनि मापन। AUKEY LS02 एक प्रस्ताव गर्दछ उपयोगको २० दिनसम्मको स्वायत्तता। तपाइँ पूर्ण रूपमा बिर्सनुहुनेछ तपाइँले कहाँ स्मार्टवाच चार्जर छोड्नुभयो। निस्सन्देह, धेरै कारणहरूको लागि, AUKEY LS02 खातामा लिनको लागि स्मार्टवाच हो।
AUKEY एयरकोर 15W वायरलेस चार्जर
हामीले यस पोष्टको सुरुमा भनेजस्तै, AUKEY यो हाम्रो मोबाइल उपकरणहरूको लागि निर्मित सामानको मात्राका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित छ। र हामी त्यो भन्न सक्छौं चार्ज गर्ने सामानहरू सबैभन्दा निर्मितमा हुन् र विश्वव्यापी बेचिन्छ। यस अवस्थामा हामी फेला पार्दछौं एक चुम्बकीय वायरलेस चार्जर यो उपयोगी को रूप मा उपयोगी छ।
हामी तपाईंलाई चार्जरको डिजाइनको बारेमा थोरै बताउन सक्छौं। यस अवस्थामा यो छ केही खास वायरलेस चार्जर यसको ढाँचा र बहुमुखीताको लागि यो प्रस्ताव गर्दछ। योसँग गोलाकार आकार र वास्तवमै सानो आकार र मोटाई छ। यो उत्तम रूपमा हाम्रो सामान्य चार्जर बन्न सक्दछ "बोक्नका लागि"। छिटो, प्रयोग गर्न सहज र सस्तो, पक्कै पनि एक रोचक विकल्प। यसलाई अब किन्नुहोस् AUKEY वेबसाइटमा सबै भन्दा राम्रो मूल्य।
AUKEY ले हामीलाई ल्याउँछ म्याग्नेटिज्ड वायरलेस चार्जरको नयाँ अवधारणा। एयरकोर १W डब्लू हो स्पष्ट रूपमा नयाँ चार्जरबाट प्रेरित एप्पल द्वारा डिजाइन गरिएको आईफोन १२ को लागी, भनिन्छ MagSafe। मात्र हामी यसका साथ वायरलेस चार्जिंगका लागि उपयुक्त हाम्रा स्मार्टफोनहरू चार्ज गर्न सक्छौं। पनि हामी यो प्रयोग गर्न सक्दछौं जब ब्याट्री चार्ज भईरहेको छ हाम्रो हातहरू समात्दै यसलाई चार्जर विच्छेदन नगरी.
छ क्यूइ वायरलेस द्रुत चार्जिंग प्रमाणीकरण १W डब्लू सम्म। हामी कुनै पनि उपयुक्त उपकरणहरू जस्तै स्मार्टफोन, हेडफोन वा स्मार्टवाचहरू चार्ज गर्न सक्छौं। साथै, उनको १.२ मिटर लामो, USB प्रकार-सी ढाँचा केबल, हामी यसको कम्प्युटरको पावर वा केही पोर्टमा प्लग भएको बेला यसको प्रयोग असहज हुँदैन।
यदि तपाईंले पहिले नै एक वायरलेस चार्जर किन्ने निर्णय गर्नु भएको छ, AUKEY एयरकोर 15W यहाँ प्राप्त गर्नुहोस् तपाईंको आफ्नै वेबसाइटमा र यसको प्रयोगको सुविधाको मजा लिनुहोस्।
एयरकोर १ 15 डब्लू चार्जरले पीotente चुंबकीय क्षेत्र कि यो बिना छोड्दै उपकरण समात्छ चाहे हामी यसलाई सार्न वा यसलाई हाम्रो हातमा समात्छौं। एक महत्त्वपूर्ण पहिलो वायरलेस चार्जरबाट विकास जससँग, हामीले टिप्पणी गरे अनुसार, हामीले आफ्नो फोनहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनु अघि नै छाड्नुपर्‍यो।
दिमागमा राख्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विवरण भनेको यो हो हामी चार्जर बक्समा पावर एडाप्टर फेला पार्न सक्दैनौं। र हामीले त्यो जान्नुपर्दछ ताकि एयरकोर पूर्ण क्षमतामा काम गर्दछ र यसको अधिकतम चार्ज गति, १W डब्ल्यू सम्म पुग्नुहोस् हामीलाई १W डब्ल्यू वा २० डब्लु बीच नेटवर्क एडेप्टर चाहिन्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » विश्लेषण AUKEY LS02 स्मार्टवाच र एयरकोर 15W चार्जर